Takelaka glasy ho an'ny trano fidiovana tsy misy palettes - mihodina, misidina
Tranobe fanakona amin'ny efitra fandroana - inona no karazana lambam-bidy izay tsara indrindra?
Nandritra ny taona maro, ny trano fonenan'ny trano famakiam-boky dia nampihena ny faritry ny efitra fandroana ho ambany indrindra. Hamintatra ireo maimaim-poana maimaim-poana 3-4 metatra ary fara-fahakeliny dia manosika ny rindrina amin'ny fomba mahazatra ny rindrina, raha tokony hampiasa takelaka fitaratra ho an'ny efitra fandroana ho solon'ny takelaka mahazatra.
Rindrin'ny glaso ao amin'ny efitra fandroana
Maro no matahotra ny hametraka amboaram-bolo fitaratra ho an'ny efitra fandroana, raha mandinika an'io endri-javatra io izay mampidi-doza ny fiainana. Azo atao ve ny mametraka takelaka glaona ao amin'ny efitrano misy haavo mahatsiravina sy hafanana be loatra? Miparitaka eraky ny fanosehana kely izy ireo, miteraka olana lehibe? Andao hiezaka ny hanilika ny tahotra rehetra:
Ho an'ny famokarana goro fitaratra ho an'ny efitra fandroana dia mampiasa glasy manokana, ny heriny dia azo oharina amin'ny fiara fitaratra amin'ny fiara. Mora ny manohy ny fotoana lava ao amin'ny efitrano mando sy ny fitsanganan'ny hafanana, manohitra ny fitsaboana sy ny tsindry.
Rehefa levona ny mari-pandrefesan'ny arofanina (ohatra, misy fiantraikany mahery vaika), dia miparitaka any anaty boribory kely izay tsy manimba ny hoditra.
Miantoka ny tenanao ary afaka miaraka amin'ny sarimihetsika fiarovana manokana, voapetraka eo amin'ny tontolon'ny gorodona. Amin'ny toe-javatra maherin'ny herim-po dia hitazona ny sombiny vita amin'ny fitaratra izy, fa tsy mamela azy ireo hanidina manodidina ilay efitrano.
Ny Glass, araka ny fantatrao, dia mavesatra sy lafo. Ireo izay maniry hanamora ny famolavolana amin'ny endriny ara-batana sy ara-batana, dia ilaina ny mandinika ireo lamba vita amin'ny plastika na polycarbonate. Ao anatin'ireo volana voalohan'ny fandidiana, dia tsy mitovy amin'ny fitaratra izy ireo, fa amin'ny farany kosa dia mihodina ary manjavozavo. Amin'ity tranga ity, manome plastika bebe kokoa ny plastika ho an'ny famolavolana fantasy, satria mety hosodoko amin'ny loko rehetra izany ary manana endrika.
Ny lamba rindrina ho an'ny trano fandroana dia mety:
Stationary (tetezana) - dia manana endriky ny fikorianam-baravarankely, mamaritra ny fandroana na ny dosy.
Mivadika (mamafa, mihodinkodina, mikodiadia) - miaraka amin'ny kofehy matevina, manana ny fiovany miovaova, izay mamela ny fampiasana ny efamira manontolo ao amin'ny efitra fandroana, ary miaro azy amin'ny rano fisotro.
Kitapo fitaratra miloko mangatsiatsiaka
Misaotra noho ny famolavolana finday mahazatra, manome lambam-baravarankely ho an'ny efitra fandroana na curtain-accordion dia manome fahafahana miditra amin'ny lafiny rehetra amin'ny efitrano malalaka, miaro azy amin'ny fiaramanidina. Izany dia tsara ho an'ny kabine kely. Rehefa tsy misy filalaovana fiarovana, dia mora mora ny mametraka azy ao anaty fihetsika iray ary mihodina amin'ny rindrina. Ny lambam-barotra toy izany dia avoakan'ny teknolojia wireframe amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, noho izany dia mitaky fikarakarana tsara izy ireo - amin'ny toerana misy ny fitaratra amin'ny endriny, ny tahiry solika dia ampiasaina mba hanangonana.
Jamba ho an'ny efitra fandroana
Lamina fantsom-pofona, varavarana misokatra, toy ny varavarana tsotra - tranga tsy fahita, toy ny trano kely sy trano malalaka. Ny anton'izany dia fampiasana tsy misy fandriam-pahalemana tanteraka: raha manokatra ny varavarana misokatra, ny faritra "maty" dia manakaiky ny koveta, ary raha miditra ianao, dia afaka miditra amin'ny faritry ny fandroana ianao amin'ny fidirana ao.
Ny vahaolana manerantany amin'ny fametrahana lahatsary sy loko rehetra dia azo atao antsoina hoe amboaram-bolo misoritsoritra eo amin'ny fandroana. Azo atao izy ireo amin'ny teknolojia sy ny rafitra tsy mahomby. Amin'io tranga farany io, ny endrika fanorenana dia mijery mazava be, toy ny hoe miparitaka eny amin'ny rivotra. Ny fanodinana dia azo tanterahana amin'ny alalan'ny sora-baventy na ny rivotra. Mendri-piderana sy azo ekena kokoa amin'ny fomba fiasa dia ny modely misy rindrina roa: amin'ny ambony sy ambany.
Raha toa ka amin'ny fisafidianana protecteurs fiarovana amin'ny alàlan'ny bala amin'ny sehatra, amin'ny ankapobeny, ny olana dia tsy mitsangana (miankina amin'ny tetibolam-panjakana sy ny tiana fotsiny ihany ny olana rehetra), ny modely angala, noho ny endriky ny endrika, dia mitaky fahagagana. Ny vahaolana tsotra indrindra amin'ny olana dia bainan'ny efitrano miaraka amin'ny lamba rongony. Amin'ity tranga ity dia tsy misy ny loza mety hitranga eo amin'ny singa ao amin'ny vilia sy ny efijery fiarovana. Azonao atao koa ny mividy gorodona gorodona, saingy amin'ity tranga ity dia tsy maintsy misaina ianao, manitsy ny mpitari-dalana ho azy io amin'ny alàlan'ny fanamaivanana ny fandroana.
Vorona misy rindrina ho an'ny efitra fandroana
Ny lamba rindrina ao anaty ranom-boankazo dia mety ho moramora na matavy (ampahany na tanteraka). Ny jiro mafana tsy vitan'ny hoe mamela ranon-drano hiparitaka manerana ny efitrano, fa azo antoka kosa ny fiarovana ny akanjo fandraisam-bahiny amin'ny mason'olona hafa, izay tena manan-danja tokoa ho an'ny efitrano fatoriana. Saingy alohan'ny hividianana sy fametrahana rindrina fantsom-bolo ho an'ny efitra fandroana, mila mieritreritra fanazavana fanampiny ianao, satria ny loharano maivana, na dia ao anaty efitrano kely aza, dia tsy ampy.
Kitapo glasa tsy misy lamba fitaratra
Ny fiara mandeha amin'ny hydromassage amin'izao fotoana izao dia afaka mifandray amin'ny sambon-danitra - karazan-trondro marobe sy switch + Ireo izay tia ny fahazavana sy ny minimalista dia ho toy ny amboaram-bolo fitaratra tsy misy pallet. Io famolavolan-dàlana maivana io dia manery ny faritra fandroana, izay nomena ny ranom-pahandroana, ka azo antoka fa manakana ny rano tsy hipoaka. Ny tranom-baventy dia miorina eo amin'ny tany sy / na ny valindrihana, ary ny fandokoana lamba dia mety hanidina na hikorisa.
Toe-jiro fanakona misy palettes
Ny safidy amin'ny fandaminana ny dipoavatra tsy misy palette, na dia mahomby tsara avy ety ivelany, dia mitaky ny famonoana (ary tsy lafo) fantsona sy ny famaranana asa. Amin'ny fividianana rindrina fitaratra amin'ny fametrahana fandriam-pahandroana, azo atao ny manamboatra koveta fandroana miaraka amin'ny fandaniana kely ary mety hiteraka tondra-drano tsy azo tsinontsinoavina. Amin'io tranga io, ny lamba fiarovana dia mifatotra amin'ny fitoeran-tavin-datany, izay miasa toy ny fanaka fanangonana rano. Ny rindrina vita amin'ny glasy amin'io tranga io dia mety ho rindrina, toy izany koa, mampifandray ireo singa fototra sy mihetsika.
Vahaolana volo eo afovoany
Bench any an-dakozia
Loko noforonina ho an'ny rindrina
Amboaram-bokatra am-bava fanorenana
Tao anatin'ny efitra fandraisam-bahiny tao an-trano
Mofomamy mofomamy misy lakandrano ao anaty lafaoro
Leonardo DiCaprio no nandray ny Oscar voalohany
Acidophiline dia tsara sy ratsy
Ahoana ny fijanonana tsy handainga?
Amin'ny firy herinandro manao ahoana ny ultrasound amin'ny fitondrana vohoka?
Ny taha ambony indrindra any Aostralia
Long jacket - mamorona sary hoso-doko
Sangisangy miaraka amin'ny emails
Bar-trondro ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny - hevitra maoderina ao an-trano
Ny akanjom-behivavy amin'ny felana - sary vitsivitsy amin'ny modely modely fialamboly ho an'ny tsirony rehetra